के तपाईलाई ॐ को वास्तविक अर्थ थाहा छ ? सबैले सेयर गर्नुहोस चिताएको पुग्नेछ !! – Chautari Online
के तपाईलाई ॐ को वास्तविक अर्थ थाहा छ ? सबैले सेयर गर्नुहोस चिताएको पुग्नेछ !!
October 3, 2020 643
सनातन हिन्दू धर्ममा उच्चारण गरिने सबै मन्त्रको सुरुवात ॐ बाट नै गरिन्छ । यो शब्द तपाई हामी सबैले सुनेका छौँ र प्राय हामी सबैले प्रत्येक दिन जप्ने पनि गरेका छौँ ।घरमा पूजा गर्दा होस् वा कुनै शुभ कार्य गर्दा होस् वा मन्दिरमा पुजारी व्राह्मणहरूले पूजा गर्दा ॐ भनेपछि मात्रै अन्य काम शुरु गर्छन् । तर के तपाईलाई यसको वास्तविक अर्थ थाहा छ ? यदि छैन भने आज हामी तपाईलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ ।
संस्कृत शब्द ॐ तीन अक्षरबाट बनेको छ , त्यो हो अ उ म १ यसको अर्थ हिन्दू धर्मको ‘माण्डूक्य उपनीषद’मा उल्लेख गरिएको छ ।केवल १२ मन्त्र भएको सबैभन्दा छोटो उपनीषद्को रचना ई.पू. ८०० सालमा ऋषिहरूले गरेको मानिन्छ ।‘अ’ अर्थात आदि, जसले व्रह्मलाई बुझाउँदछ ।‘उ’ अर्थात उन्नती, जसले विष्णुलाई चिनाउँदछ ।‘म’ अर्थात मृत्यु, जसले महेश्वरलाई बुझाउँदछ ।
यस उपनीषदमा ॐ शब्दलाई सबै मन्त्र तथा वेदको आधारभूत इकाई मानिएको छ , जसले स्वयं परमव्रह्मा (सिंगो र केवल एक) र सारा व्रह्माण्डलाई जनाउँदछ ।विश्व एवम् भूत,वर्तमान र भविष्य काल तथा यिनीहरूभन्दा पर जो नित्य तत्व सर्वत्र व्याप्त छ , त्यो नै ॐ हो । यो सबै व्रह्म हो र यो आत्मा पनि व्रह्म हो ।ॐ ले आत्माको अभिव्यक्तिको चार अवस्थालाई जनाउँदछ , जसलाई ‘चतुष्पाद’ भनिन्छ (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति र तुरीय) ।
३. ‘सुषुप्ति’ अवस्थाको आत्मालाई ‘प्रज्ञ’ भनिन्छ । यसलाई प्रगाढ निन्द्राको रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ आनन्दमय ज्ञानको स्वरूप प्राप्त गर्न सकिन्छ , जहाँ इच्छा लोप हुन्छ र सर्वेश्वर,सर्वज्ञ तथा अन्तर्यामी ज्ञानको अनुभूती हुन्छ ।४. तथापी, उपर्युक्त तीन अवस्थाहरूभन्दा पर रहेको आत्माको चतुर्थ पाद अर्थात ‘तुरीय’ अवस्था नै उसको सच्चा र अन्तिम स्वरूप हो, जसमा ऊ न जाग्रत हुन्छ , न स्वप्न हुन्छ , न त सुषुप्ति नै । त्यहाँ केवल शान्त अनि परमज्ञान हुन्छ र त्यसैलाई ॐ भनिन्छ ।
यो पनि: हामिले धेरै खानेकुराहरु एकैसाथ मिसाएर खाने गर्छौ । किनकी कुनै चिजहरु स्कसाथ मिसाएर खाँदा स्वादिष्ट हुन्छ । तर यस्ता चिज पनि हुन्छ जुन एक आपसमा मि साएर खानुहुदैन । मिसाएर खाएमा स्वास्थ्यमा ग म्भिर सम स्या देखा पर्छ।
आज हामी तपाईंलाई खाने-पिउने यस्ता केहि चीजहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन सँगै खानु हुँदैन। जस्तो कि, तपाईंले दहीसँग संग कहिल्यै पनि खट्टा फल खानु हुँदैन।यी चिजसँगै खादा पच्दैन जसको कारण पेट ग डब ड हुन्छ। यस दहीले चिसो हुन्छ, त्यसैले यसलाई तातो कुनै पनि चीजको साथ खान हुँदैन।
जस्तै धेरै मानिसहरू दहीसँग माछा खान्छन् तर त्यसो गर्नु हुँदैन किनभने माछाले तातो बनाउछ । आयुर्वेदका अनुसार कुखुरा र खजूर कहिले पनि सँगै खान हुँदैन, यो हानिकारक पनि हुन सक्छ।अब दूधको बारेमा कुरा गरौं। जस्तो तपाईंलाई थाहा होला दूध एक जनावरको प्रोटीन हो, फ्राइड गरिएको, त्यसैले भुटेको खाना खानाले यसले प्रतिक्रिया देखाउन सक्छ ।
धेरै व्यक्तिहरू दूध चियामा नुन हालेर खाँन्छन् तर मँ तपाईंलाई भन्छु कि यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। दुधमा नुन मिल्नाले मिल्क प्रोटिन जम्दछ । र पोषणमा तत्वमा कमी आउँछ ।दुधको साथमा फलफुल खानुहुँदैन । त्यसो गर्दा दुधमा रहेको क्याल्शियमले फलहरूको एन्जाइम सोस्दछ र यस कारणले शरीरले फलहरूबाठ प्राप्त हुने पोषण तत्व प्राप्त गर्न सक्दैन।
धेरै मानिसहरूलाई उमालेको अण्डामा निचोड्ने लेबो खाने मन पर्छ, तर म तपाईंलाई भन्छु कि यो कहिले पनि हुँदैन। त्यसो गर्नाले स्वास्थ्यलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ। र त्यहाँ हृ दयघा तको जोखिम पनि हुन सक्छ।
यो पनि:सामान्यतया ग र्भमा ९ महिना ९ दिन नै बच्चा किन रहन्छ ? यो धेरै नसोचिएको वा नगरिएको प्रश्न हो । तर, यसको पछाडि वैज्ञानिक कारण भने छ ।हाम्रो ब्रह्माण्डका ९ ग्रहहरूले आआफ्ना किरणबाट ग र्भमा हुर्किरहेको बच्चालाई विकसित गर्न सहयोग गर्छन् ।
प्रत्येक ग्रहले आफ्नो स्वभाव अनुसार बच्चाको शरीरको विभिन्न भागलाई विकसित गर्छन् । यदि कुनै ग्रह ग र्भमा हुर्किरहेको बच्चाको समय कमजोर छन् भने केही उपायद्वारा त्यसलाई ठीक गर्न सकिन्छ । ग र्भ रहेको पहिलो महिनाभरि शुक्र ग्रहको प्रभाव रहन्छ । यदि ग र्भव स्थाको समयमा शुक्र कमजोर छ भने त्यसलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
शुक्र बलियो भएको खण्डमा जन्मने बच्चा पनि सुन्दर जन्मिन्छ । त्यसैले उक्त समयमा ग र्भव ती महिलाले चटपट चीज खानुपर्छ । दोस्रो महिनामा मंगलको प्रभाव रहन्छ । मंगल ग्रहको प्रभाव रहँदा गुलिया खानेकुरा खाएर र राता वस्त्र धारण गरेर मंगललाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
बृहस्पतिको प्रभाव हुन्छ, तेस्रो महिनामा ।ग र्भावस्थाको तेस्रो महिना ग र्भवती महिलाले दूध र गुलिया पकवान्नको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । यस्तै वस्त्रमा पहेंला वस्त्र धारण गर्नुपर्छ ।चौंथो महिना सूर्य ग्रहको प्रभाव रहन्छ । यो समयमा रस पिउने गर्नुपर्छ भने सिम्रिक रंगका वस्त्र धारण गर्दा सकारात्कता बढी रहन्छ ।
यस्तै चन्द्र ग्रहको प्रभाव रहन्छ, पाँचौं महिनामा । दूध, दहि र चामल सँगसँगै सेता चीजको सेवन र सेतै वस्त्र धारण गर्नुपर्छ । किनकि, चन्द्रमाको आकार पनि सेतै हुने गर्दछ ।अर्को महिना अथार्त् गर्भावस्थाको छैटौं महिनामा शनि ग्रहको दृष्टि रहन्छ । यो अवधिमा कसिला चीज, क्याल्सियम र रसिला खानेकुरा खानुपर्छ भने वस्त्रको रंग स्काइ ब्लु हुनुपर्छ । अन्य महिना जस्तै सातौं महिना हो, बुधको ।
जुस, फलको सेवन सातौं महिनाका लागि फाइदाजनक रहन्छ । हरियो रंगको वस्त्र धारण पनि यही महिनामा गर्नुपर्छ ।अर्को महिना अर्थात् आठौं महिना चन्द्रमाको हो भने नवौं चाहिँ सूर्यको । यो समयमा यदि कुनै ग्रहहरू नीच राशिमा विचरण गर्दैछन् भने त्यसका लागि वैदिक यज्ञ गर्नुपर्ने हुन्छ । ग र्भ जति ग्रहको किरणले सेकिन्छ, त्यति नै महान् र मेधावी पनि बन्छ ।
Prevभैरहवाबाट काठमाडौं आउदै गरेको ट्रक त्रिशुलीमा खस्यो
Nextकस्तो सपनाको फल के हुन्छ ?यस्तो सपना देखे भाग्यमानी बन्ने संकेत !
तिहारको मुखमा ३ घरका एक्ला छोराहरुको मृत्यु, सोकमा डुब्यो परिवार